Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta kulan la qaatay madaxa iskaashiga iyo horumarinta ee saafarada Sweden ku leedahay wadanka kenya. – MESAF
News & Events News Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta kulan la qaatay madaxa iskaashiga iyo horumarinta ee saafarada Sweden ku leedahay wadanka kenya.
Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta kulan la qaatay madaxa iskaashiga iyo horumarinta ee saafarada Sweden ku leedahay wadanka kenya.
Kulankaaso lagaga wada hadlay xoojinta iyo dardar gelinta wada shaqaynta labada dal.
Waxaana kamid ahaa qodobaday kawada hadleen horumarinta haweenka Soomaliland iyo ka qayb galka siyaasadda&shaqo abuurka.
dhanka kale waxay taageereen waxqabadka balaadhan ee ka socda guud ahaamba dalka.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta shaqo abuur u samaysay 55 qoys oo danyara qoysaskaaso kaso kala jeeda gobolada dalka oo dhan. Iyada o dhanka kale xadhiga laga jaray dhismayaal cusub o wasaarada laguso kordhiyay.
Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshadda iyo qoyska jamhuuriyadda soomaliland marwo Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa manta xafiiskeeda ku qaabishay saraakiil sarsare oo ka socda dalka turkey kana tirsan xafiiska deeqaha waxbarasho ee qaaradda Africa.